Fandosirana loza :: Ifampitadiavana hatramin’izao ilay mpamily namono olona telo • AoRaha
Fandosirana loza Ifampitadiavana hatramin’izao ilay mpamily namono olona telo
Efa ho iray volana izao no tsy nahitana an’ilay mpamily taksibe nanao loza namoizana ain’olona telo, teny amin’ny By-Pass, Ankazobe Alasora. Tsy mbola tratra io mpamily io, hatramin’ny omaly hariva nakana ny vaovao farany.
Milaza ho efa manao ny tatitra sy hanatitra ny valin’ny fanadihadiana eny amin’ny Fitsarana ny zandary eny Alasora misahana ny famotorana. «Haseho eny amin’ny Fampanoavana miaraka amin’ny tatitry ny fanadihadiana nataonay ny olona rehetra nalaina am-bavany tamin’iny raharaha iny. Anisan’ireo natao famotorana ny vady aman-janak’ilay mpamily», hoy ny zandary eny Alasora.
Tamin’ny harivan’ny zoma 7 jona no nitrangan’ny lozam-pifamoivoizana, teny By Pass. Voadonan’ny taksibe iray ny môtô «scooter » noentina lehilahy iray. Niala izany ilay fiara fitaterana ka nivoaka ny arabe. Nivadika ary nandona olona hafa teo akaiky teo, avy eo. Voadona ny mpianaka, zaza­vavikely iray sy ny reniny saika hiditra tao anaty fiara teo an-tsisin-dalana. Samy maty tsy tra-drano ireo olona telo ireo. Tsy hita popoka, nanomboka teo, ny mpamilin’ny taksibe.
Famonoana vehivavy lehibe
Herisetra mamoafady sy fampijaliana :: Lehilahy vahiny torian’ny sakaizany noho ny fanerena hihinana maloto